China Phone Anti-Slip Pad Mat ifektri abakhiqizi | SJJ
I-anti-slip pad noma umata kungagcina ifoni yakho ephathekayo, izibuko zelanga, okhiye nokunye okuku-dashboard yemoto yakho ngaphandle kokuhamba uma ushayela. Ungayisebenzisa futhi ekhishini lakho, endlini yokugezela nasehhovisi ukugcina izinto zimile. Kuyisipho esihle sokuphromotha, i-premium, ukukhangisa, isikhumbuzo ...
I-anti-slip pad noma umata kungagcina ifoni yakho ephathekayo, izibuko zelanga, okhiye nokunye okuku-dashboard yemoto yakho ngaphandle kokuhamba uma ushayela. Ungayisebenzisa futhi ekhishini lakho, endlini yokugezela nasehhovisi ukugcina izinto zimile. Kuyisipho esihle sokuphromotha, i-premium, ukukhangisa, isikhumbuzo, izesekeli zemoto nokuhlobisa. Futhi ingasetshenziswa njenge-coaster noma i-debris pad ekhaya, ehhovisi noma esikoleni.
Yenziwe nge-PU Gel engeyona enobuthi, engenaphunga ne-PVC ethambile, ngeke ikhubazeke futhi iphuke
Ngokumunca okukhulu okuqinile, i-anti-slip ne-shockproof
Easy ukusebenzisa, akukho Yesigcilikisha noma uzibuthe ezidingekayo
Iyasebenza, iyasuswa, iyagezeka futhi iyaphatheka
Langaphambilini Ukuma Kwezingcingo Nabaphethe Amakhadi
Olandelayo: Ibhande le-Back Back
Amacala we-Silicone Earphone
Ama-Antibacterial TPU Phone Cases
Ikhadi Lesikweletu Ucingo Holder